Rahoviana no ilaina ny mampianatra ankizy amin'ny vilany iray? Ahoana ny fomba ampianarana ankizy iray hangataka vilany?
Manomana zaza amin'ny vilany iray - manomboka manomboka ny fianarana haingana?
Ity fanontaniana ity dia mahaliana ireo ray aman-dreny be fiahiana dia enim-bolana amin'ny zaza malala iray. Amin'izao fotoana izao, manomboka mipetraka ny crumb, ary manomboka mipetra-potsiny mipetraka amin'ny vilany izy. Saingy ny fomba fiasa mety? Na ahoana ny fomba ampianarana ny ankizy amin'ny sehatra toy ny olon-dehibe? Ny valiny amin'ireto fanontaniana ireto sy ireo fanontaniana hafa manan-danja dia asongadina etsy ambany.
Fotoana hampianarana ankizy amin'ny vilany iray?
Betsaka ray aman-dreny no liana amin'izany, ary mbola bebe kokoa aza ny renibeny. Raha ny marina, nanamafy izy ireo fa tamin'ny fotoanany dia ankizy efa ho 3 volana no nanome fahafahana fa te hanoratra. Ny reny dia mila ny ankizy hianatra ny zava-drehetra aloha, fa tsy ny zava-drehetra dia mora. Momba ny fotoana tokony hampianarana ankizy amin'ny vilany, tsy misy valiny marina. Eto, toy ny ao anatin'ny ambaratonga fivoahana amin'ny fivelarana, dia tsy maintsy mijery fotsiny amin'ny kely ilay izy. Ny fampisehoana ilay zaza amin'ny vilany dia tokony hanomboka rehefa misy fahaverezan-tsaina ara-tsaina sy ara-pahasalamana amin'izany. Mandritra izany fotoana izany, ny sasany amin'izy ireo dia vonona ho an'izany amin'ny herintaona, ary ny hafa kosa aloha loatra. Fa eo anivon'ireo zaza amam-pahaizana dia misy ny fiheverana fa ny fizotry ny atidoha, izay manara-maso ny fizotry ny fitrandrahana dia mihatsara kokoa ny 18 volana.
Mora haingana ve ny mampiaraka ny ankizy amin'ny vilany iray?
Nanapa-kevitra ireo havana fa nihanitombo ny sombiny, ka tonga ny fotoana hanombohana hampianarana ilay zaza amin'ny vilany. Saingy aiza no hanomboka hianatra ny vilany? - mahaliana izy ireo. Ilaina ny fomba fiasa sy rafitra rehetra mikendry ny fampiofanana tsara ny ankizy amin'ny vilany. Ny lehibe indrindra dia hodinihana bebe kokoa:
Ity zavatra vaovao ho an'ny karapuza ity dia tsara kokoa ny miaraka aminy, aoka izy haneho izay tiany indrindra;
Mendrika ny hanomboka hametraka ny fofon-jazakely ao an-trano, ka manomboka mahatsapa ny fifandraisana "nokapohina - nanjary mena";
Ny lanjan'ny fampiofanana dia zava-dehibe hanombohana raha tsy salama sy salama ny carapace;
Tsara ny manomboka fampianarana rehefa mafana ny andro. Avy eo, eny an-dalambe, koa, aza mitondra diaper, ary tsara kokoa ny manolotra im-betsaka "ao anaty kirihitra".
Ahoana ny fomba ampianarana ankizy iray hangataka vilany?
Nisy akanjo amam-behivavy tsara tarehy sy fehikibo kely noraisina, tonga ny fotoana hanombohana ny fizotry ny fianarana! Ireto ambany ireto ny fomba fampiofanana tavoahangy:
aoka izy hitsangana "eo imasony";
Ny fihetsiky ny ray aman-dreny dia tsy maintsy rafitra. Izany hoe, raha ao an-trano izy ireo dia nilaozan'ny kapaoty, dia tokony hiezaka ny tsy hametraka azy ireo isika;
Ny ankizy dia tokony hanana akanjo kely azo alaina haingana;
Aza hadinoina ny mamboly kobay aorian'ny sakafo sy ny torimaso, eo anoloan'ny arabe ary avy hatrany rehefa avy nody. Ho tonga fahazarana izy io;
raha toa ka tonga soa ny zava-drehetra, ny mofomamy dia mendrika hoderaina, ary raha misy tsy fahombiazany - aza kivy.
Ahoana ny fomba hampianarana ankizy hipetraka eo ambony vilany?
Ankizy miverimberina. Izy ireo dia mandefa olon-dehibe amin'ny zava-drehetra. Raha, raha ny fanandraman'ny olon-dehibe dia mbola mitohy ny ankizy dia afaka manao zavatra hafa ianao: avelao ny zokiny lahy, rahavavy na renim-pianakaviana mba hampiseho amin'ny ohatra fa azonao atao ary tokony hipetraka amin'izany lohahevitra izany. Matetika ny rambony aorian'io dia mitsahatra tsy hatahotra an'io "biby mahagaga" io, dia manomboka miaraka aminy ihany koa ary ny fampiofanana ny ankizy amin'ny vilany dia mahomby kokoa. Zava-dehibe ny mifidy zavatra iray mifanentana tsara. Ny lavaka dia tsy tokony ho lehibe loatra ka ho lany eo. Sambany vao afaka mipetraka amin'ny olon-dehibe ianao, manohana ilay zaza eo ambany lany, raha ilaina, mba tsy hatahotra azy.
Misy mpandevina maoderina momba ny fampianarana zaza iray amin'ny vilany iray mandritra ny iray andro. Antsoina hoe: "Manamboatra vilany ho an'ny andro iray." Ireo mpanoratra mpanoratra Ezrin Nathan sy Richard Fox dia manome toky fa ny famakiana ilay boky, ny fotoana laniana amin'ny fiofanana dia handray 4 ka hatramin'ny 24 ora. Ny toko iray dia mamaritra fomba mahaliana iray - afaka mandefa fanampiana amin'ny kilalao maoderina, ohatra, saribakoly izay afaka manoratra. Afaka misotro saribakoly avy amin'ny tavoahangy ianao, ary manamboatra azy amin'ny vilany - ary, oh, fahagagana iray, - ho lasa mena izany! Ny ankizy dia tena sahiran-tsaina amin'ny zavatra hitany fa miezaka koa izy hamerina izany amin'ny hoavy tsy ho ela.
Ahoana ny fomba ampianarana ankizy iray hiditra ao anaty vilany?
Ny peristalsis amin'ny tsina dia mavitrika aorian'ny sakafo. Amin'izao fotoana izao, matetika ny ankizy dia te-hiala. Ny fomba fampiofanana ny ankizy amin'ny vilany dia milaza fa ny ray aman-dreny dia tokony hamboly ny zazakely aorian'ny sakafo voalohany. Tena zava-dehibe ny hahatonga an'io lehilahy io ho falifaly. Ity singa ity dia tokony ho mety amin'ny habeny, satria hanao zava-dehibe, dia mila mipetraka mandritra ny fotoana fohy.
Ahoana ny fomba ampianarana ny ankizy iray hanoratra ao anaty vilany?
Ny teknikan'ny fampiofanana bitika, noresahina etsy ambany, dia natokana mandritra ny 7 andro. Noforonin'ny British Gina Ford ho an'ny ankizy 1,5 taona izany, raha afaka mahatakatra ireo torolàlana tsotra. Ireto misy:
Ny andro voalohany amin'ny maraina, dia nesorina tamin'ny tovolahy ny pampus ary matetika izy ireo dia nambolena nandritra ny andro. Ny ankizy dia azo alaina amin'ny zavatra mahaliana amin'izao fotoana izao, ka tsy misy faniriana hitsambikina alohan'ny fotoana.
Ny andro faharoa dia manamboatra ny fahaiza-manao. Tsy maintsy mitandrina ianao, miahy ny karapuz tsy hilalao sy hamadika ny vilany amin'ny fotoana.
Amin'ny andro fahatelo, dia tsy tokony hanao kapa na dia mandeha aza. Saingy talohan'izany dia tsy maintsy manasa ny penina hanao ny raharahanao ianao.
Araka ny teknika amin'ny andro fahefatra dia ankizy maro no vonona ny hanontany tena raha mila mandeha any amin'ny toeram-pivoahana izy ireo. Amin'ity fotoana ity, avelao ny vilany eo amin'ny toerana ambony. Ary aorian'ny herinandro dia mila alefa any amin'ny efitrano hafa izy, mba hahatakaran'ilay zaza fa mila miatrika ny zavatra ilainao ianao fa tsy eny afovoan-trano, fa amin'ny toerana manokana.
Ahoana ny fomba hampianarana ankizy iray hijoro amin'ny vilany amin'ny alina?
Nandeha ny dingana voalohany tamin'ilay diany - amin'ny andro androany, ny karapuz dia tsy mametraka ny raharahany intsony amin'ny toerany, fa amin'ny maha olon-dehibe azy kosa dia manontany raha mila manoratra izy. Tonga ny dingana manaraka - ahoana ny fomba hampianarana ilay zaza amin'ny vilany amin'ny alina? Raha tsy afaka matory mandritra ny alina manontolo ny zaza ary mijanona maina, dia ny lalana ihany no hambolena. Tamin'ny voalohany, ankizy maro no nanao hetsi-panoherana, saingy tamin'ny farany dia nampiasa azy io izy ireo ary raha ny marina dia manao izany amin'ny fanjakana mahatsiaro.
Fantatr'i Neny tsara kokoa noho ny olon-kafa ny zanany kely ary ho afaka hanamboatra azy. Azonao atao ny mamolavola fandaharam-potoana iray, ary mametraka ankizy iray amin'ny 12 ora, ary avy eo amin'ny 6 taona. Avy eo dia tokony esorina ny tohatra iray ary hijery raha misy ny fiakaran'ny vidin'ny iray alina. Raha misy ny tsy fahombiazana sy ny tsy fahampiana - aza manahy ary aza manosihosy ny mofomamy. Noho izany, mbola tsy feno tanteraka ny vatany ary tsy afaka mifehy tsara ny fizotrany.
Ny fanatanjahan-tena an-tsokosoko dia fanampiana tena tsara amin'ny fotoana nanapahan'ny ray aman-dreny ny hampianatra ny ankizy amin'ny vilany. Ny kiraro ho an'ny fanofanana ny vilany dia nohadina mba hanamafisany ivelany tsy misy rano, ka ny sofina sy ny tapany dia ho voavonjy. Ary ao anaty izy ireo, toy ny mahazatra. Izany hoe, raha misy totozy ao anatin'izy ireo, dia tsapao ny tsy fahatsapana. Ary zava-dehibe izany ho an'ny fahatsapana ny antony tokony hangatahana anao any amin'ny toeram-pivoahana. Misy ihany koa ny lantihy tsy mahazatra-kapila manamboatra ny vilany. Nalaky haingana ny zava-drehetra. Saingy mandeha tsara izy ireo rehefa mandeha. Raha nanontaniana ny totozy, dia afaka ny haingana sy haingana izy ireo, izay tsy azo lazaina momba ny diabe tsotra.
Ny zaza tsy mipetraka amin'ny vilany - inona no tokony ataoko?
Nividy ny trano fidiovana ny ankizy, efa nisy ny fitsapana rehetra, saingy tsy miova ny raharaha. Ny karapuz dia mandà tsy hiditra ao. Amin'ity tranga ity, efa ilaina ny miala amin'ny fomba nentim-paharazana. Ny fanampiana dia tonga ny fampisehoana tantara an-tsary mankany amin'ilay vilany. Iray amin'ny sary mihetsika, misy andian-tsarety maromaro, mampiseho ny fomba ompiana zana-posy, puppy. Ireo biby kely dia milalao, ary avy eo dia mamboly sy mipetraka izy ireo mba hankalaza ny raharahany. Ankafizin'ny ankamaroan'ny ankizy ny sariitatra iray momba ny moto Pippu. Misy andian-dalan'i Peppa hampianatra an'i George handao vilany. Amin'ireny ankizy ireny dia miasa tsy misy dikany izany, sambatra izy ireo maka sary an-tsaina ny mombamomba azy ary mora amin'ny toetrany.
Nijanona teo amin'ilay vilany ilay zaza
Matetika dia mitranga amin'ny fahombiazana ny fahazarana amin'ny fahitana, ny zazakely dia nanao ny zava-drehetra, ary avy eo dia nandà tampoka teo amin'ny vilany. Ny havany dia tsy afaka mahatakatra ny zava-nitranga tamin'ny zanany malalany, sy ny fomba hiatrehana ilay olana. Voalohany dia mila mahatakatra ny antony mety amin'ity fihetsika ity ianao. Mety ho:
Manahy momba ny zavatra iray ilay lehilahy kely, malemy izy, na, ohatra, lany ny nifiny;
krizin'ny taona (krizin'ny roa na telo taona);
tsindrona vokatry ny fifindrana, fampifanarahana amin'ny zaridaina ary zavatra hafa;
fifandirana eo amin'ny fifandraisana eo amin'ny fianakaviana;
Antony hafa mety hisy fiantraikany ratsy eo amin'ny zaza.
Raha fantatrao ny antony, dia tokony hofafana araka izay tratra izany, ka hametraka ny toe-javatra mahasoa ho an'ny zaza. Raha toa ka tsy azo esorina ny antony dia ilaina ny manana faharetana, fa tsy manery ny tanora tsy hifantoka amin'ny olana. Tokony homena tsikelikely ny vilany, aza manao an'izany. Raha, na dia eo aza ny ezaka rehetra, mbola mitohy ny olana, ary tsy azo atao ny famerimberenan'ny zaza mipetraka amin'ny vilany, ilaina ny mitady fanampiana amin'ny dokotera.
Tsy te handeha amin'ny vilany ilay zaza
Amin'ny ankizy, ny tsy fahavitan-tena hanao zavatra dia afaka manafina tahotra mahazatra. Noho izany toe-javatra izany, ny havana dia niaina rehefa matahotra ny vilany ny ankizy iray - inona no tokony hatao? Eto ianao dia mila miezaka mamantatra izay mety hiteraka tahotra. Ireto misy antony maromaro:
Nanjary te hampiavaka azy ireo ny mason'izy ireo, raha mbola tsy vita ara-batana izy. Ny fampianarana tsy mihambana hatramin'ny voalohany dia ny fahatahorana io lohahevitra io;
Ny vilany dia zava-baovao ao an-trano. Nisy mpikambana kely tao amin'ny fianakaviana mbola tsy nahazatra azy, saingy miezaka ny mipetraka izy ireo. Hatramin'ny fotoana nividianana ny fampiofanana, fotoana tsy maintsy handalinana;
Nolazaina teo aloha ny zazalahy kely noho ny kilalaon-jaza, ary namolavola kapila tsy ara-dalàna izy io.
Na ahoana na ahoana, raha efa mahafantatra ny fomba tokony hiresahana ilay zaza dia mila miresaka aminy ianao ary miezaka mitady ny antony mahatonga ny tahotra ho an-janany, ary avy eo dia miezaha hanafoana izany amin'ny famenoana ny zanakao lahy na zanaka vavy amin'ny hafanana sy fitiavana. Ny ankizy dia tokony hahatsapa ny fanohanany amin'ny havany ary mahafantatra fa na inona na inona mitranga, ny olon-dehibe dia hanampy sy hanampy foana. Amin'izany fomba izany dia azo atao ny mitombo karapuza salama sy sambatra, izay hahazoany ny zava-drehetra eo amin'ny fiainana.
Eidetic ho an'ny zazalahy
Lalao ho an'ny fampandrosoana ny kabary
Ilay tranga efa nandrasana ela - Kate Middleton dia niteraka zaza faharoa!
Jessica Alba dia niarahaba ny zanany vavy Onor tamin'ny faha-9 taonany
Ny fahantrana amin'ny herinandro
Ankizilahy sy ankizivavy
Ny bronchoscopy amin'ny havokavoka
Seza fandriana mihantona
Ny akanjon'ny sekoly amam-borona
Fitsidihana any Arzantina
Toeram-ponenan'ny efitra fandroana
Miasa amin'ny chakras
Ahoana no ahafahan'ny tongotra iray manontolo ao anaty vilany fanosotra?
Famolavolana ny efitrano ao an-trano
Ny tsenan'i San Antonio